Internet of Things - Vanguard
Posted by Vanguard on September 2, 2016 .
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ကျော်လွန်သွားတဲ့အခါ Internet of Things က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ဘယ်လိုအကျိုး သက်ရောက်မှုရှိမလဲ။
Internet of Things (IoT) ဆိုတာ ဘာလဲ?
Internet of Things (IoT) ြကားလိုက်ရတာနဲ့ အဲ့ဒါကဘာလဲ၊ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲဆိုတာကို စဉ်းစားရတာနဲ့ ဦးနှောက်ေြခာက်နေ ြက ြပီမလား။
IoT ဆိုတာ အင်တာနက်ကို ချိတ်ဆက်အသုံးြပုနိုင်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ (ကွန်ပျူတာ၊ စမတ်ဖုန်း) ပါပဲ။ ကားတွေ၊ မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းတွေနဲ့ နှလုံးခုန်စက်တွေကိုတောင် IoT ကတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ ြကာလာနဲ့အမျှ IoT ဟာ တ ြဖည်းြဖည်းတိုးတက်လာြပီး ချိတ်ဆက်အသုံးြပုနိုင်တဲ့ ကိရိိိယာတွေလည်း များလာမှာပါ။
BI Intelligence နဲ့ Business Insider ရဲ့ သုသေတနရှာဖွေမှုမှတစ်ဆင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ IoT နဲ့ ချိတ်ဆက် အသုံးြပုနိုင်မယ့် ကိရိယာပေါင်း (၂၄) ဘီလီယံ အထိရှိလာမှာြဖစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတစ်ယောက်က ကိရိယာ (၄) မျိုးအထိ ချိတ်ဆက်အသုံးြပုလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ဒီအချက်တွေအရ ဒေါ်လာ (၆) ဘီလီယံကို IoT solution ြဖစ်တဲ့ Application Development၊ Device Hardware၊ System integration၊ Data storage၊ Security နဲ့ Connectivity များအတွက် သုံးစွဲမှာြဖစ်ပါ တယ်။ IOT ပေါ်မှာ ရင်းနှီးြမုပ်နှံမှုနဲ့ အသုံးစရိတ်ဟာ လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း (၁၃) ထရီလီယံအထိ ရှိလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားြကပါတယ်။
IoT ဟာ Industry Revolution နောက်တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါေြကာင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးြပုနေတဲ့ ပုံစံတွေအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုြဖစ်စေပါတယ်။
နောက် (၂) နှစ်ြကာတဲ့အခါမှာ BI Intelligence တွေက IoT တိုးတက်မှုအတိုင်း တိုးတက်လာမှာြဖစ်ပါတယ်။ အထူးသ ြဖင့် IoT တွေက လူမှုပတ်ဝန်းကျင် (သုံးစွဲသူ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ) နဲ့ ဆက်သွယ်မှုများ၊ ထိန်းချုပ်မှုများကို IoT နဲ့ ချိတ်ဆက် အသုံးြပုနိုင်မယ့် ကိရိယာများနဲ့အတူ ပါဝင်ပတ်သတ်မှု များရှိလာမှာပါ။ ဒါ့အ ြပင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဆက်သွယ်မှု၊ ပို့ဆောင်မှုနှင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်း (၁၆) ခုတို့မှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
IoT က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ အဓိက အားထားရာြဖစ်လာပါတော့မယ်။ IoT ေြကာင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာ စရိတ်များ လျော့ကျသွားြခင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးများလာြခင်းနဲ့ စျေးကွက်သစ်များ ချဲ့ထွင်လာနိုင်ြခင်းတို့ ေြကာင့် လုပ်ငန်းတိုးတက်စေတယ်လို့ ယူဆလာြကပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်ရေး၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာရေးနဲ့ ြပည်သူတို့ရဲ့ ဘဝတိုးတက်ရေးကိုသာ အလေး ထားြကပါတယ်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များက IoT ecosystem ရဲ့ ဒုတိယအနေနဲ့ ပစ်မှတ်ထားခံရသော နယ်ပယ်ြဖစ်လာမှာပါ။
IOT အသုံးြပုနေတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ သုံးစွဲသူကတွေကတော့ IOT နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ ငွေေြကးြမုပ်နှံမှုတွေ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေ ဝယ်ယူ သုံးစွဲလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ ကားတွေမှာ Internet တပ်ဆင်ချိတ်ဆက် အသုံးြပုလာြကပါတယ်။ အိမ် (သို့မဟုတ်) ရုံးတွေမှာ ြကိုးမဲ့ကွန်ယက်နဲ့ ချိတ်ဆက်သလိုမျိုးပေ့ါ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီလိုလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ကားတွေ ပိုများလာမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေြကာင့် အနာဂတ်ကား တွေမှာ နောက်ထပ် application အသစ်အသစ်များကို ြကည့်ဖို့ ြပင်ဆင်ထားြကဦးနော်။